Israa’iil oo difaacday ficilkeeda Qasa iyadoo 55 ruux ay dhinteen | Hangool News
Israa’iil oo difaacday ficilkeeda Qasa iyadoo 55 ruux ay dhinteen
May 15, 2018 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Dhimashadii ugu badnayd ayaa Qasa ka dhacday tan iyo dagaalkii 2014kii, masuuliyiinta Falastiinna waxay sheegeen in ciidammada Israa’iil ay dileen 55 ruux ayna dhaawaceen 2,700 oo kale.
“Maanta waa maalin weyn, waxaanan doonaynaa in aan xeendaabka gudubna, Israa’iil iyo adduunkaba u sheegno in aanan ogolaan doonin in waligeen nala heysto” ayuu yiri Cali oo macalin ka ah magaalada Qasa.
Image captionBoqolaal qof ayaa ku dhaawacmay dibadbaxyada , sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta.
Rarista safaarada ayaa ah guul weyn oo usoo hoyatay Ra’isulwasaare Netanyahu.
Dadka Yuhuuda ee ku dhaqan magaalada Tel Aviv ayaa ammaanay madaxweyne Trump, iyada oo la taagay tabeelooyin lagu bogaadinayo.